လူသိနည်းပြီး တစ်ပင်လုံး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ သင်္ဘောမညိုးပင် – Suehninsi
ဒီအပင်က (သင်္ဘောမညိုးပင်) တစ်ပင်လုံး ဆေးဖက်ဝင်တယ်..မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ကြပါအုံး… မြန်မာဆေးဖက်ဝင် သင်္ဘောမညိုးပင်(ဒေသအလိုက် အမည် အခေါ်အဝေါ် ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်) ဒီအပင်က တစ်ပင်လုံး ဆေးဖက်ဝင်တယ် ခင်ဗျ..မသိသူကတော့ ကျော်သွားပေါ့..သိသူကတော့ ဖော်စားပေတော့..ဘာတွေ ဆေးဖက်ဝင်သလဲဆိုရင်.
Hypertension (high blood pressure) သွေးတိုးရောဂါ – အရွက်ခြောက် (၂၅-၂၀) ဂရမ် နဲ့ဂန္ဓမာပန်းပွင့်(၁၀)ဂရမ်ကိုရေသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျန်အောင် ပြုတ်သောက်ပါ။နောက်တနည်းက အရွက် (၇) ရွက် (သို့) ပန်း (၇)ပွင့်ကို ရေနွေးပူပူထဲ၌ထည့်၍ သောက်ပါ။ ဒါကတော့ အိပ်ယာမဝင်ခင်(drink before bed)သောက်သုံးပေးပါ။Leukemia (သွေးကင်ဆာ) – ဒီပန်းပင်ရဲ့အရွက်ခြောက်
၂၀-၂၅ ဂရမ် ထဲကို စမုံးစပါးအနည်းငယ်ထည့်၍ ရေ (၁)လီတာခန့်ဖြင့် ရောပြုတ်ပြီး သတ္တုရည်ကျန်တဲ့အထိ့ ကျိုချက်ပါ။ ရရှိလာသော သတ္တုရည်ကို မနက်တစ်ကြိမ် နေ့လယ်တစ်ကြိမ် တစ်နေ့ ၂ကြိမ် သောက်သုံးပေးပါ။ Asthma and bronchitis(ပန်းနာ၊လည်ချောင်းနာ)
ပန်းနာ – လည်ချောင်းနာအတွက် ဒီအပင်ရဲ့အမြစ်ကို တူးယူပါ။ ရရှိလာသောအမြစ်ကို သန့်စင်အောင်ရေဆေးကြောပြီး ရေ ၅ခွက်ထည့်၍ ပြုတ်သောက်ပါ။ မနက်တစ်ကြိမ် နေ့လယ်တစ်ကြိမ် တစ်နေ့ ၂ကြိမ်သောက်ပေးပါ။ Fever(အဖျား) – အဖျားရောဂါအတွက် အမြစ် နှင့် အရွက်ကို ရောပြုတ်ပြီးတော့ ကျန်ရှိတဲ့အရည်ကို သကြားအနည်းငယ်
ရောထည့်ပြီး တစ်နေ့ ၂ကြိမ် သောက်သုံးပါ။ Inflammation of the stomach and dysentery(အစာအိမ်ရောင်ခြင်းနှင့်ဝမ်းကိုက်ခြင်း) အစာအိမ်ရောင်တဲ့သူများနှင့်ဝမ်းကိုက်တတ်သူများအတွက် သူ့ရဲ့အရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျန်အောင်ကျိုချက်ပါ။ကျန်ရှိတဲ့သတ္တုရည်ကိုသကြားအနည်းငယ်ထည့်၍ တစ်နေ့ ၂ကြိမ်သောက်သုံးပါ။ Anemia(သွေးအားနည်းရောဂါ) – သွေးအားနည်း
ရောဂါသမားတွေအတွက်က ဒီပန်းရဲ့ အဖြူပွင့်များကို ခူးဆွတ်ပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်စာဖြင့် တစ်ည စိမ်၍ မနက်အိပ်ယာထတစ်ကြိမ် သောက်သုံးပေးပါ။ Mumps,swelling,abscessesandulcers(ပါးချိတ်နာခြင်း၊ရောင်ခြင်းနှင့်ပြည်တည်နာ) ပါးချိတ်နာခြင်း၊ရောင်ခြင်း နှင့် ပြည်တည်နာများအရွက် အရွက်ကို ခူးဆွတ်ပြီး ကပ်ပေးထားပါ။
Burns(မီးလောင်ဒဏ်ရာ) – အပူလောင်၊မီးလောင်းခံထားရသူများအတွက် အရွက် လက်တစ်ဆုပ်စာကို ထမင်းဖြူနှင့်ရောနယ်ပြီး ဒဏ်ရာတဝိုက်ကို ဖိ့၍ အုံပေးထားပါ။ New wound(သွေးထွက်ဒဏ်ရာ) လောလော လတ်လတ် သွေးထွက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများအနေဖြင့် အရွက်ကို
ပါးစပ်ဖြင့်ဝါးပြီး အရည်ရောအဖတ်ပါ အနာပေါ်သို့ဖိ့အုံပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းများ သောက်သုံးရန်မသင့်ပါဘူး..တားမြစ်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ကျွန်တော် ဘဝခါးခါးပါ။သင်္ဘောမညိုးပင် ဒီအပင်က တစ်ပင်လုံး ဆေးဖက်ဝင်တယ် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါသင်္ဘောမညိုးပင် ဒီအပင်က တစ်ပင်လုံး ဆေးဖက်ဝင်တယ်..မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ကြပါအုံး…
ဒီအပငျက (သင်ျဘောမညိုးပငျ) တဈပငျလုံး ဆေးဖကျဝငျတယျ..မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ မြှဝပေေးလိုကျကွပါအုံး… မွနျမာဆေးဖကျဝငျ သင်ျဘောမညိုးပငျ(ဒသေအလိုကျ အမညျ အချေါအဝျေါ ကှဲလှဲနိုငျပါတယျ) ဒီအပငျက တဈပငျလုံး ဆေးဖကျဝငျတယျ ခငျဗြ..မသိသူကတော့ ကြျောသှားပေါ့..သိသူကတော့ ဖျောစားပတေော့..ဘာတှေ ဆေးဖကျဝငျသလဲဆိုရငျ.
Hypertension (high blood pressure) သှေးတိုးရောဂါ – အရှကျခွောကျ (၂၅-၂၀) ဂရမျ နဲ့ဂန်ဓမာပနျးပှငျ့(၁၀)ဂရမျကိုရသေုံးခှကျတဈခှကျတငျကနျြအောငျ ပွုတျသောကျပါ။နောကျတနညျးက အရှကျ (၇) ရှကျ (သို့) ပနျး (၇)ပှငျ့ကို ရနှေေးပူပူထဲ၌ထညျ့၍ သောကျပါ။ ဒါကတော့ အိပျယာမဝငျခငျ(drink before bed)သောကျသုံးပေးပါ။Leukemia (သှေးကငျဆာ) – ဒီပနျးပငျရဲ့အရှကျခွောကျ
၂၀-၂၅ ဂရမျ ထဲကို စမုံးစပါးအနညျးငယျထညျ့၍ ရေ (၁)လီတာခနျ့ဖွငျ့ ရောပွုတျပွီး သတ်တုရညျကနျြတဲ့အထိ့ ကြိုခကျြပါ။ ရရှိလာသော သတ်တုရညျကို မနကျတဈကွိမျ နလေ့ယျတဈကွိမျ တဈနေ့ ၂ကွိမျ သောကျသုံးပေးပါ။ Asthma and bronchitis(ပနျးနာ၊လညျခြောငျးနာ)
ပနျးနာ – လညျခြောငျးနာအတှကျ ဒီအပငျရဲ့အမွဈကို တူးယူပါ။ ရရှိလာသောအမွဈကို သနျ့စငျအောငျရဆေေးကွောပွီး ရေ ၅ခှကျထညျ့၍ ပွုတျသောကျပါ။ မနကျတဈကွိမျ နလေ့ယျတဈကွိမျ တဈနေ့ ၂ကွိမျသောကျပေးပါ။ Fever(အဖြား) – အဖြားရောဂါအတှကျ အမွဈ နှငျ့ အရှကျကို ရောပွုတျပွီးတော့ ကနျြရှိတဲ့အရညျကို သကွားအနညျးငယျ
ရောထညျ့ပွီး တဈနေ့ ၂ကွိမျ သောကျသုံးပါ။ Inflammation of the stomach and dysentery(အစာအိမျရောငျခွငျးနှငျ့ဝမျးကိုကျခွငျး) အစာအိမျရောငျတဲ့သူမြားနှငျ့ဝမျးကိုကျတတျသူမြားအတှကျ သူ့ရဲ့အရှကျကို သုံးခှကျတဈခှကျတငျကနျြအောငျကြိုခကျြပါ။ကနျြရှိတဲ့သတ်တုရညျကိုသကွားအနညျးငယျထညျ့၍ တဈနေ့ ၂ကွိမျသောကျသုံးပါ။ Anemia(သှေးအားနညျးရောဂါ) – သှေးအားနညျး
ရောဂါသမားတှအေတှကျက ဒီပနျးရဲ့ အဖွူပှငျ့မြားကို ခူးဆှတျပွီး ရတေဈဖနျခှကျစာဖွငျ့ တဈည စိမျ၍ မနကျအိပျယာထတဈကွိမျ သောကျသုံးပေးပါ။ Mumps,swelling,abscessesandulcers(ပါးခြိတျနာခွငျး၊ရောငျခွငျးနှငျ့ပွညျတညျနာ) ပါးခြိတျနာခွငျး၊ရောငျခွငျး နှငျ့ ပွညျတညျနာမြားအရှကျ အရှကျကို ခူးဆှတျပွီး ကပျပေးထားပါ။
Burns(မီးလောငျဒဏျရာ) – အပူလောငျ၊မီးလောငျးခံထားရသူမြားအတှကျ အရှကျ လကျတဈဆုပျစာကို ထမငျးဖွူနှငျ့ရောနယျပွီး ဒဏျရာတဝိုကျကို ဖိ့၍ အုံပေးထားပါ။ New wound(သှေးထှကျဒဏျရာ) လောလော လတျလတျ သှေးထှကျဒဏျရာ ရရှိသူမြားအနဖွေငျ့ အရှကျကို
ပါးစပျဖွငျ့ဝါးပွီး အရညျရောအဖတျပါ အနာပျေါသို့ဖိ့အုံပေးပါ။ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျလောငျးမြား သောကျသုံးရနျမသငျ့ပါဘူး..တားမွဈထားပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ…ကြှနျတျော ဘဝခါးခါးပါ။သင်ျဘောမညိုးပငျ ဒီအပငျက တဈပငျလုံး ဆေးဖကျဝငျတယျ မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျပါသင်ျဘောမညိုးပငျ ဒီအပငျက တဈပငျလုံး ဆေးဖကျဝငျတယျ..မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ မြှဝပေေးလိုကျကွပါအုံး…
Source : MMLoad
တရုတ်ဆရာဝန်မကြီး ပြောပြခဲ့တဲ့ ကျောက်ကပ်ကို သဘာဝနည်းနဲ့ ပြန်ကောင်းစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း